“I kissedagirl and I liked it” ဆိုတဲ့ Demi Lovato ?‍❤️‍?‍?
On April 6, 2018 By fairy
Demi တစ်ယောက်ကတော့ Fan တွေကို မရိုးမယွဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ တနင်္လာနေ့ New Jersey မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ Tell Me You Love Me World 2018 Tour ဖျော်ဖြေပွဲ စင်မြင့်ထက်မှာ အဆိုတော် Kehlani နဲ့ အနမ်းခြွေခဲ့တာပါ။
Demi ရဲ့အဆိုအရ ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် “Demi ရဲ့ပွဲကို Kehlani ကလာကြည့်မယ်လို့ပြောထားခဲ့ပေမယ့် Demi ကစင်ပေါ်ကနေ Kehlani ကိုလိုက်ရှာတာ မတွေ့တော့ အော် သူမလာတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့ချိန်မှာ Kehlani က နောက်ဖက်ကနေရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး ပုခုံးကိုလာဖက်တာပေါ့လေ။ မျှော်လင့်မထားတာမို့ သူမကိုတွေ့လိုက်ရတော့ ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိပါဘူး နှစ်ယောက်သား အနမ်းခြွေမိတာပါပဲတဲ့။ ဒါကကြိုတင်စီစဉ်ထားတာမဟုတ်လို့ သူမက တကယ့်ကို လန်းပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ” လို့ BBC Radio 1 နဲ့ အင်တာဗျူးမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့တာပါ။
.@Grimmers caught up with @DDlovato about *~that~* Kehlani kiss that left the internet shook ? pic.twitter.com/IXY1TgHNiy
Demi နဲ့ Kehlani တို့ရဲ့ fan တွေကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို လိုက်ဖက်လွန်းပါတယ်ဆိုပြီး သဘောတူနေကြပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း နှစ်ယောက်သားမြန်မြန် date ကြပါတော့တို့ ယူတို့နှစ်ယောက်အတွဲဖြစ်မယ့်အချိန်ကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူးတို့၊ စင်ပေါ်ကတကယ့်ရိုတဲ့အနမ်းလေးပါတို့ ဘာတို့ပေါ့လေ ?
Demi ရဲ့ Instagram မှာလဲ “…….ဒီညလေးကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတဲ့ caption လေးနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်တွဲပုံတင်ထားသလို Kehlani က Honey ဆိုတဲ့သီချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲ “I like my girls just like I like my honey…..” ဆိုပြီး tweet တစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ Honey သီချင်းရဲ့ အဖွင့်စာသားဖြစ်တာမို့လို့ ပိုပြီး သို့လောသို့လောထင်ချင်စရာဖြစ်စေတဲ့အချက်ပါပဲ။
Kehlani ကလဲ နှစ်ယောက်တွဲပုံနဲ့ စာသားတွေမှတအားကိုတင်ထားတာတွေ့မှာပါ။ အက်မင်မသင်္ကာ ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုက Kehlani မတ်လ ၁ရက်တုန်းကတင်ထားတဲ့ ပုံမှာဆို jean ဆင်တူလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ဘာလားပေါ့လေ ?။ Kehlani ကိုယ်တိုင်ကလဲ သူဟာ ကျားမ မရွေး date ပါတယ်လို့ ဝန်ခံထားတဲ့သူဆိုတော့ကာ ?
A post shared by ARTIVIST 333 (@kehlani) on Mar 1, 2018 at 8:24am PST
ဒါပေမယ့် အက်မင်ကတော့ Demi လေးစိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပါလေ သူဘာပဲလုပ်လုပ် ဘယ်သူနဲ့ပဲတွဲတွဲ နားလည်ပေးပါတယ်။ Demi လေးပျော်မယ်ဆို ဘာမဆိုလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်…..အမြဲအပြစ်မမြင်ပဲ ချစ်ပေးနေမှာပါလို့….?
PREVIOUS POST Previous post: လဲကျရာက ပြန်ထခဲ့သူများထဲက Heavy Metal Godfather – Tony Iommi
NEXT POST Next post: GiGi နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေတင်မက သူ့ရဲ့ Instagram ပုံတွေအားလုံးကိုပါ Delete လိုက်တဲ့ Zayn